Iqela lokuhlela | Izixhobo zasimahla
I-Hardware Libre yiprojekthi enikezelwe ekusasazeni itekhnoloji entsha yeHardware evulekileyo. Uninzi lwaziwa ngokuba yiArduino, Raspberry kodwa ezinye hayi njengeeFGA. Singabanxibelelanisi bebhlog be Iindaba zeBlogs esebenzayo ukusukela ngo-2006.
Ngo-2018 sibe ngamaQabane e Ukukhululeka Esinye seziganeko ezibaluleke kakhulu zaseSpain ezinxulumene nentshukumo yasimahla nevulekileyo, kuzo zombini izixhobo zekhompyutha kunye nesoftware
Iqela lokuhlela lasimahla leHardware lenziwe liqela labenzi, iingcali kwi-Hardware, i-elektroniki kunye netekhnoloji. Ukuba ufuna ukuba yinxalenye yeqela, unako sithumele le fomu ukuba sibe ngumhleli.
Ingcali kwezobuchwephesha nakwizenzekelayo zasekhaya, zisazi kubunzulu bokwakha iikhompyuter kunye nenkqubo yazo ukusuka kwelona nqanaba lisezantsi, ngakumbi kwiinkqubo ze-UNIX / Linux. Ndinolwazi lwenkqubo ngolwimi lwe-KOP lwee-PLCs, i-PBASIC kunye neArduino yee-microcontrollers, i-VHDL yenkcazo yehardware, kunye ne-C yesoftware. Kwaye uhlala unomdla engqondweni yam: ukufunda. Ke imithombo evulekileyo yezixhobo kunye nesoftware ilungile, ikuvumela ukuba "ubone" ukungena kunye nokuphuma kwezi projekthi zinomdla.
UJuan Luis Arboledas
Ingcali ye-IT inomdla kakhulu kwihlabathi leerobhothi kunye ne-Hardware ngokubanzi ukusukela ebusheni, into endikhokelele ekubeni ndingazinzanga malunga netekhnoloji yakutshanje okanye ukuzama zonke iintlobo zeebhodi kunye nezakhelo eziwela ezandleni zam.
UJoaquin Garcia Cobo
Ndingumthandi wekhompyuter kwaye ngakumbi iiHardware zasimahla. Okwakutshanje kuyo yonke into malunga neli hlabathi limnandi, apho ndithanda ukwabelana khona ngayo yonke into endiyifumanayo nendiyifundayo. Ihardware yasimahla lilizwe elinomdla, andithandabuzi ngaloo nto.
UToni de Frutos
I-Geek ikhoboka lobuchwephesha, imidlalo yemfazwe kunye nentshukumo yomenzi. Ukudibanisa kunye nokudibanisa zonke iintlobo zekhompyuter zizinto endizithandayo, into endiyichitha kakhulu kusuku lwam kunye neyona nto ndiyifundayo.
Umthandi phantse naluphi na uhlobo lwetekhnoloji kunye nomsebenzisi wazo zonke iintlobo zeenkqubo zokusebenza, kunye nomntu othanda ukubamba naluphi na uhlobo lwesixhobo se-elektroniki esiwela ezandleni zam.